Back You are here: Home सम्पादकीय छात्राबासमा स्तरबृद्धि
विद्यार्थीहरुलाई शिक्षामा सघाउन शक्तिखोरमा स्थापना गरिएको चेपाङ छात्रवासमा रकम अभावले समस्याको चाङ लागेको छ । विक्रम सम्वत् २०५७ सालमा जिल्ला विकास समिति चितवनको पहलमा नेदरल्याण्ड विकास नियोगले उक्त छात्राबासको निर्माण गरेको थियो । रकम अभाव हुँदा छात्रावासमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गतिविधिमा समस्या परेको छात्रावास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । छात्रावासमा चितवनका पहाडी क्षेत्रका छ कक्षादेखि १० कक्षासम्मका चेपाङ विद्यार्थीहरु पढ्दै आएका छन् । छात्राबास सञ्चालन गर्न कुनै नियमित आयश्रोत छैन । नेपाल सरकारले चेपाङ विकास कार्यक्रमलाई छुट्याउने रकममध्ये प्राप्त हुने वार्षिक साढे नौ लाख रुपैयाँले उनीहरुको खानपान, स्टेसनरी र ड्रेसको व्यवस्था गरिन्छ ।
सरकारले चेपाङ विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम पनि समयमा निकासा हुँदैन । आर्थिक वर्षको शुरुमै रकम निकासा भए पो योजना बनाएर खर्च गर्नु ? त्यही रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निकासा हुने गरेको छ । यसले हरेक आर्थिक वर्षको आधाबढी समय छात्रावास उधारोमा सामान ल्याएर चलाउने गरिएको छ । बल्लतल्ल रकम निकासा भयो, पहिलेको ऋण तिर्दैमा सकिन्छ । छात्राबासमा नयाँ काम गर्न कहिल्यै रकम पुग्दैन । यसवर्ष पनि छात्रावास सञ्चालन गर्न करिब दुई लाख रुपैयाँ अपुग भएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ४० जना विद्यार्थी राख्नसक्ने क्षमताको छात्राबासमा यतिखेर १२ जना छात्रासहित ३८ जना चेपाङ विद्यार्थी छन् । छात्राबासको सबैभन्दा ठूलो खर्च भनेको छात्रावासमा बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई खुवाउने राशन हो । छात्रावासका विद्यार्थीहरुलाई खाना पकाउने दाउरा, छात्राबासको चौकीदारको तलब, विद्यार्थीलाई घर जाँदा लाग्ने भाडा, छात्रावासमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र छात्रावासको मर्मतसंभार पनि त्यसैले पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । वर्षमा एकपटक आउने रकमले त्यत्रो खर्च कसरी धान्नु ?
जिल्लाभरिका चेपाङ विद्यार्थीमध्ये खुला रुपमा दरखास्त मागेर छात्रावासमा विद्यार्थी राख्ने गरिन्छ । छात्रावासमा अध्ययनको लागि राख्दा टुहुरा, गरीब, सिमान्तकृत, न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ । छात्रावासबाट अहिलेसम्म दुई सय बढीले एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । उनीहरु अधिकांशले शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वन प्राविधिक, भेटेनरीलगायतका क्षेत्रमा रोजगार पाएका छन् । विद्यार्थीको माग धेरै भएकाले यसको क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था छ तर रकम अभावमा त्यो सम्भव भएको छैन । त्यसवाहेक छात्राबासकै सुधारकै लागि पनि रकम खर्चनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दिने रकमबाट दैनिक खर्च चल्नै मुस्किल परिरहेको बेला यसको स्तरबृद्धि सम्भव देखिदैन । त्यसका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग हुनु जरुरी छ ।